MPT မှ Exclusive Sponsor အဖြစ် ပံ့ပိုးထားတဲ့ Myanmar Blogger Society (MBS) ရဲ့ မြန်မာ Blogger နေ့ ကို MICT Park မှာ ဒီနေ့အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ “Blogging AsaCareer” အမည်နဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဒီပွဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ Blogger နဲ့ Facebook မှာနာမည်ထင်ရှားသူတွေ ဖြစ်တဲ့ နေဘုန်းလတ်၊ သီဟလုလင်၊ Yangonese၊ တင်မြတ်ထက် နဲ့ ကိုဇော်ဇော်မျိုးလွင်တို့အပြင် အရည်ကြို၊ ကိုဇာနည်ဝင်းထက်၊ ခင်မြတ်မြတ်နိုင် အစရှိသူတွေနဲ့အတူ Alpha Zawgyi ကို စတင်ထူထောင်ခဲ့သူ ကိုရဲမြတ်သူလည်း ပါဝင် ဆွးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ပွဲမှာ Blogging နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်တွေနဲ့ လက်ရှိအွန်လိုင်းမှာ သိသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဝေမျှ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
Exclusively Sponsored by MPT, “Blogging AsaCareer” talk show organized by Myanmar Blogger Society (MBS) to honor the Myanmar Blogger Day was held successfully at MICT Park. During this event, bloggers and popular Facebook influencers of Zaw Zaw Myo Lwin, Nay Phone Latt, Thiha Lulin, Yangonese, Ko Zarni Win Htet, A Yay Kyo, Khin Myat Myat Naing (Go With me), Tin Myat Htet-Pink GOld (Azuri Creative) and Alpha Zawgyi pioneer Ko Ye Myat Thu were participated on the talk show. Today event focused on Blogging and current trend on social networks and other informative subjects were discussed.
Photo and news source by MTP facebook
MPT registration desk
Labels: blogday blogdays event MBS MPT Myanmar Blogger Society